Zoma fahatelo tsotra mandavantaona – Trinitera Malagasy
Tsy ankasa Hebrio 10, 32-39/ Salamo 36/
Ankasa 2 Samoela 11, 1-4a. 5-10a. 13-17/Salamo 50
Md Marka 4, 26-34
Mitohy ny fampianaran’i Jesoa momba ny fanjakan’ny lanitra. Rehefa azontsika fa tsara fo Andriamanitra ary sitrany ny hiadanantsika dia mandeha ho azy ny fitadiavana izay fomba mba hahatanterahan’izany anio dia anio ihany, araka ny faniriantsika. Lazain’ny salamo 36 fa raha miantehitra aminy isika dia izy no hanao ny fananatsika ny rariny ho mazava atsinanana sy ny fahamarinana ho mitatao vovonana.
Ambaran’i Md Marka mazava anefa fa tahaka ny zava-boahary ny fanjakan’Andriamanitra, mety ho lasa hazobe hialofan’ny voro-manidina, saingy tsy maintsy afafy aloha ny voa (and. 26) dia avy eo mitsimoka sy mitombo (and. 27-28) ka hahazoantsika izay vokatra nandrasana (and. 29).
Ny famafazana ny fanjakan’ny lanitra dia ampiasain’i Marka ny matoanteny βάλλω (ballô), izay tsy dia fampiasa loatra raha hilaza famafazana ara-teknika, satria hilazana ny fandatsahana zavatra izay amin’ny tany ka tsy mampaninona na aiza na aiza hilatsahany: henontsika fa ny sasany latsaka teny amin’ny lalana, ny sasany latsaka teny amin’ny tany be vato, ny sasany latsaka anaty tsilo. Entina hilazana ny hafalian’ilay mpamafy izany, tsy mifidy ny fahamendehan’ny fontsika mba hamafazany ny teniny. Ny olon-drehetra, ny firenena rehetra no hamafazany ny teniny.
Refeha milaza ny fomba fitombon’ny voa indray izy dia ataony amin’ny antsipirihany araka ny ambaratongany avy, saingy tsy nasiany teny na dia kely aza ny momba ny mpikarakara sy ny asa mety ilaina mba hamokaran’ny voa. Tiany hampitaina amintsika amin’izany ny hery ao anaty hahafahan’ny voa mitsimoka sy mamokatra samirery, na matory na mifoha ny olona. Raha sanatria tsy hanam-paharetana eo ilay mpamafy dia mety hanosy ketsa indray no hiafarany. Mila faharetana mba hahitana ny fitsiriana sy ny fitomboan’ny voa: ny tahony aloha, vao salohy vao ventim-bary amin’ny salohy. Miteny lango eo imason’ny vary izay teren’ny adim-piainana ka tsy afaka ny hiandry fararano.
Tsy sanatria an’izany isika no hihevitra hisolo ny Fanahy Masina amin’izay fahamatoran’ny Voa ao am-pon’ny olombelona. Ny anjaran’izay nahazo andraikitra hanabe sy “hitory any an-tafontrano izay heno tao amin’ny mangingina” dia ny mitandrina amin’ny fifantenana ny masom-boly, satria na aiza na aiza torìna ny Teny (an’Andriamanitra fa tsy fahendren’olombelona) dia mitsimoka sy miorim-paka ny Fanjakan’Andriamanitra. Misy fotoana manko hanalana ny vato sy ny tsilo, fa misy fotoana koa tsy maintsy hatoriana sy hiandrasana, raha tiana ny hioty vokatra. Indraindray anefa moramora kokoa ny mihevitra ny hioty anio izay nafafy anio, dia herisetra sy fanimbàna no vokatr’izany. Voaongotra miaraka amin’ny tsiparifary ny voa tsara.
Manana hery hitombo tahaka ny voan-tsinapy ny Teny. Tsy halehibeazana araka ny hevitr’olombelona anefa izany. Mety misy hirehareha amin’ny isan’ny kristianina na ny hatsaran’ny Trano fivavahana sanatria. Izany anefa dia entina hilazana ny herin’ny Fampianaran’i Kristy izay afaka manova ny fiainantsika ho fialokalofan’ny voromanidina (Salamo 91,1), ka tsy ho fisehosehoana ivelany fa ao am-pontsika tsirairay ny Fanjakan’Andriamanitra, hoy i Md Lioka (Lk 17, 21). Tsy fijinjana hamaizana fa hafalian’ny mpijinja mitondra ny vokatra mody any an-trano (Sal 125) no entin’ny Evanjely maneho amintsika ny fotoam-pijinjana. Ny hanangona ny zanany rehetra any an-tsopitra no sitrak’Izy Ray.
Miantso antsika handinika sy hametra-panontaniana amin’izay mety ho fahalehibeazana heverintsika izany, sao sanatria tsy araka ny Evanjely fa araka izao tontolo izao: izay te ho lehibe dia aoka izy ho mpanompo, ho toy ny zaza vao teraka (Evanjely Timote sy Tito: Md Lioka 22, 24-30). Angamba ity no sarotra indrindra amin’ny torohevitry ny Evanjely ka maro no tsy mahazo azy, tsy vitsy no mandika azy vilana mba hiarovana ny fomba fiainana sy ny fahazarana, indrindra rehefa voakitikitika ny tombontsoa manokana (vola aman-karena, hafinaretana mandalo, voninahitra sns).
Raha tsy azontsika izany dia mila mitokana any amin’ny mangingina miaraka amin’i Jesoa isika. Tsy mandeha ho azy araka izany ny fikolokoloana ny Teny fa mila manokana fotoana handinihana sy hamakafakana. Anjaran’ny Mpitondra Fiangonana sy ny tompon’andraikitra ny manomana sambokely hipetrahan’i Jesoa mba hahafahany mampianatra zavatra marobe ny olona, saingy mbola adidiny ihany koa ny manome fanofanana sy fampianarana mafonja, ho an’ireo izay te handalina ny Teny ka manaiky hovany ho tonga rahalahy sy anabavy ary renin’i Jesoa.
Sabotsy fahatelo tsotra mandavantaona